Rasheed Ahamed's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Rasheed Ahamed
Rasheed Ahamed anoshanda seOganiki Kukura KweMutungamiri pa Automatad, Inc. Automatad idhijitari midhiya zvigadzirwa Co, izvo zvinopa suite yehurongwa hwekuita mari mhinduro dzinotyaira hunyanzvi uye yepamusoro monetization pachiyero. Uchishandisa chikuva chedu digitaalinen vaparidzi vanogona kugadzira, kuita mari uye kugadzirisa kweakanakisa kushambadza ruzivo.
Ndeapi akakwira CTR Nhare uye Desktop Ratidza Ad Saizi?
Chitatu, Nyamavhuvhu 12, 2020 Chitatu, Nyamavhuvhu 12, 2020 Rasheed Ahamed
Kune mushambadzi, kushambadzira kwakabhadharwa kwagara kuri chinhu chakavimbika chekutenga vatengi. Kunyange nzira iyo makambani anoshandisa kushambadzira kwakabhadharwa inogona kusiyanisa - vamwe vanoshandisa kushambadzira kwekudzosera kumashure, vamwe kwekuzivisa mhando, uye vamwe kuzviwana pachavo - mumwe nemumwe wedu anofanira kupinda mazviri neimwe nzira. Uye, nekuda kwekupofumadza kwemabhanner / kushambadzira kushambadzira, hazvisi nyore kutora pfungwa dzevashandisi nezviratidziro zvekushambadza wobva wavawana.